Nguva yekuverenga: 8 maminitsi Ungave uri kushanyira Amsterdam kokutanga kana kudzoka kuongorora Vakamupfekedza migero asi zvakare, iwe uchazoda kuziva nezve zvakasarudzika zvinhu zvekuita muAmsterdam! Kana iwe wagadzirira kutsvaga zviitiko zvinopfuura Damrak avenue muAmsterdam, runyorwa urwu…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Vachipemberera Day waMambo muNetherlands zvingave zvakanaka mubato iri Holland. On 27 Kubvumbi, Ivo vanopemberera zuva rokuberekwa nenziyo King Willem-Alexander, mumigwagwa mapato, misika nhata, uye mafaro nhumbi. Mambo pachake anofamba kuburikidza nyika nemhuri yake. Pahusiku hwapfuura…